Iyi haisi Influencer Yekushambadzira Strategic, Stop It! | Martech Zone
Iyi haisi Influencer Yekushambadzira Strategic, Stop It!
Mugovera, July 22, 2017 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Douglas Karr
Kune ruzha rwakanyanya pasocial media zvekuti dzimwe nguva zvinonetsa kutevedzera. Ini ndinoda chokwadi chekuti ndine yakakura inotevera online uye ini ndinoedza kuita uye kupindura kune wese anokumbira. Kana iri kambani yandakambokurukura nayo, ini ndinonyanya kuita nguva ndopindura zvinoenderana.
Izvo zvakati, pane yakashata zano iri kutanga kubuda online irikudya nguva yangu mune yakananga mameseji uye yakanangwa mameseji. Makambani ari kutsikisa zvikumbiro zvakagadzirirwa kwandiri senge iri pazasi kuti ndiite kuti ndipindure kana kugovana nevateereri vangu. Handina chokwadi kana ivo vari otomatiki kana ruoko-curated, asi ivo zvinogumbura - uye ini ndinovaita kuti vazive nezvazvo.
Heino mumwe muenzaniso pazasi. Ini ndinowanawo toni yeaya kubva kumakambani akasiyana kuburikidza neshoko rakananga uye email zvakare. Ndabvisa zita resangano sezvo vachiwanzo svikira neakanakisa zvemukati zvinoenderana nevateereri vedu. Iyi tweet pazasi; zvisinei, haisi imwe yeaya mameseji. Ini ndanga ndisingataure nezve Snapchat, handina kukumbira zano remumwe munhu nezve Snapchat, uye ini handina basa neyaSnapchat ichangoburwa ficha.
Nei iri iri Rinotyisa Kufurira Strategy?
Uyu munhu akasarudzika uye akananga kutarisisa akabata ayo akandibvisa pane rangu rimwe basa. Email mapango chimwe chinhu, ini ndinosvika pakuiongorora nenguva yangu uye kupindura kana kudzima pazvinenge zvichidikanwa. Heano iwo (chaiwo) fananidzo:
Muenzaniso A: Ndakagara padhesiki rangu ndichishanda, uye huwandu hweemail hunowanikwa mukati. Pamwe pamwe negomba pane mamwe mameseji kubva kune vatengi uye tarisiro. Hapana mumwe wevanotumira anotarisira kuti ndipindure nekukasira, zvakadaro. Kana ini ndawana mukana wekutarisa email, ndinovatarisa ndobva ndapindura zvinoenderana.
Muenzaniso B: Ndakagara padhesiki rangu ndichishanda, uye iwe unondikanganisa, ndibvunze kana ndichifarira musoro wandakanga ndisati ndambotaura newe. Zvino, vanhu vazhinji vanondikanganisa vane chimwe chinhu chakakosha kubvunza kuti vazive kuti nguva yangu yakakosha uye chega sosi iri shoma. Ivo havangangopinda mukati.
Rudzi urwu rwekutarisa runodzinga kukosha kwenguva yangu uye runonditora kubva kune vanhu vanoda kutaura neni kana kuda rubatsiro rwangu.
Kana iwe uchifunga kuti ichi chakakodzera kukurudzira nzira yekutengesa - kusvika uye kundivhiringidza zuva rese - wakanganisa. Ndokumbirawo muremekedze nguva yangu. Kana iwe uchizosvika kwandiri pachangu pasocial media, zviite kana ini ndavhura musuwo weiyo hurukuro. Zvikasadaro, chingoburitsa yako meseji seyakajairwa - pasina pachako kundimaka.
Kuti ushande nevanokurudzira, unofanirwa kuvaka hukama nesu. Ndinofanira kuvimba kuti uri kutsvaga rubatsiro rwangu uye hauzoise vateveri vangu panjodzi. Ichi chi kwete iyo inosimudzira yekushambadzira zano.
Tags: kushambadzira kushambadziraevanhu vezvenhauTweettwitter meseji
7 Maitiro Ekuwedzera Kubatikana pa Instagram